Samsung Tablet Iweghachite - Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung Tablet
Ị ga-anabata eziokwu na ị pụghị izere data ọnwụ bụla. Na-ekwu, mgbe eji gị Samsung mbadamba, ị pụrụ inweta ọnọdụ ebe ozi nkeonwe gị Nwela ehichapụ na ị na-amalite na-achọ ụzọ isi mee ka naghachi gị data azụ. Ebe ọ bụ na ọ dịghị "egweri biini" na Samsung mbadamba ọsọ na android n'elu ikpo okwu, data mgbake usoro abụghị ka dị mfe na-egbu dị ka ọ bụ na sistem arụnyere na PC.
A ole na ole ga-ekwe omume ihe n'azụ na ndị dị otú ahụ data ọnwụ pụrụ ịgụnye:
• mberede Data Removal - Ị nwere ike wepụrụ mkpa faịlụ site na gị Samsung mbadamba accidently eche na ọ bụ ihe na-adịchaghị mkpa.
• Factory Tọgharia - Ị nwere ike butere mmepụta ihe nrụpụta usoro na-na-ekpochapụ gị mkpa data.
• hụrụ Importance - Ị nwere ike ụma wepụrụ data na-ewere ya mkpa ma n'oge na-adịbeghị ghọtara na ọ bụ bara uru.
• Data wepụrụ Ndị ọzọ - Ị nwere ike nyefee gị mbadamba onye ọzọ (gị na ụmụaka atụ) bụ ndị nwere ike wepụrụ data nke n'amaghị ama.
Ebe ọ bụ na ị pụghị izere data ọnwụ na e nweghị n'ụzọ kwụ ọtọ usoro naghachi furu efu faịlụ, ị ga na-adabere a-atọ ndị ọzọ software inyere gị aka.
Otu nke kasị mma (na eleghị anya nanị dị) ngwa naghachi furu efu data si Android ngwaọrụ a Wondershare Dr.Fone for Android. Trial version nke Wondershare Dr.Fone for Android nwere ike ibudata for free site na njikọ nyere n'okpuru. Otú ọ dị, iji na-erigbu ya atụmatụ na zuru, ị ga-
Nga requisites maka iji Wondershare Dr.Fone
• Ị ga-enwe USB debugging nyeere na gị Samsung mbadamba. Iji mee otú ahụ:
o Gaa Ntọala> Ihe ngwaọrụ.
O si nri ebi ndụ, ugboro ugboro enweta Mee nọmba ruo mgbe ị na-egosipụta na a ozi-asị na ị dị ugbu a Mmepụta ma ọ bụ ihe dị ka ya.
O Site n'aka ekpe ebi ndụ, pịa Mmepụta nhọrọ.
o si nri ebi ndụ, enweta na-elele USB debugging checkbox ugbu n'okpuru debugging udi.
• Ị ga nwere Windows ma ọ bụ Mac PC. (A Windows PC na-eji ebe a maka ngosipụta.)
• Gị Samsung mbadamba ga-jikọọ na PC site na eriri USB na Ẹnam ekese tinyere ngwaọrụ.
Ịdọ aka ná ntị: Ozugbo ị na-aghọta na gị data e ehichapụ, ị ga-kwụsị iji ngwaọrụ gị ozugbo zere ihe ọ bụla n'ihu mmebi ahụ furu efu data (nke nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-akpakọba ndị ọzọ faịlụ), na kwa ime ka data mgbake usoro mfe na ngwa ngwa.
Mgbe na niile tupu requisites na aghọtachaghị ihe kwuru ịdọ aka ná ntị, ị nwere ike malite usoro nke na-agbake na-ehichapụ faịlụ site na gị Samsung mbadamba. Iji na-eme otú ahụ, ị ​​ga-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Samsung mbadamba na kọmputa
Nke mbụ niile, ozugbo jikọọ gị Samsung mbadamba na kọmputa na eriri USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone for Android na kọmputa gị, ị ga-enweta isi window dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 2. Kwado USB debugging na gị Samsung mbadamba
Ọzọ, i kwesịrị inwe ike USB debugging na gị Samsung mbadamba. Ụzọ nwee USB debugging bụ dị iche iche dị ka Android OS nsụgharị. E nwere ụzọ atọ maka gị nhọrọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị Samsung mbadamba ka e nyeere USB debugging, ọ ga-eduzi gị ozugbo na nzọụkwụ ọzọ. Bụrụ na ọ bụghị, i nwere ike pịa "meghere? Next ..." na ala nri akuku ime na.
Nzọụkwụ 3. San ehichapụ ozi, kọntaktị, foto na video na gị Samsung mbadamba
Mgbe ị na-ebe a, pịa "Malite" iji nyochaa gị Samsung mbadamba. Tupu-eme nke a, jide n'aka na batrị nke ngwaọrụ gị bụ karịa 20%, nke ga-hụ na ị ọma ngwaọrụ analysis na ike iṅomi.
Mgbe ha nyochasịrị ngwaọrụ gị, usoro ihe omume ga-anọgide na-ike iṅomi ya furu efu data. N'otu oge, ihe ngwa - Superuser arịrịọ, ga-gbapụta na gị Samsung mbadamba ihuenyo. Mkpa ka ị pịa "Kwe Ka" ka usoro ịga na na. Wee pịa "Malite" na usoro si window n'okpuru.
Nzọụkwụ 4. Preview na-agbake SMS, kọntaktị, foto & video si Samsung mbadamba
Usoro ihe omume ga iṅomi gị Samsung mbadamba maka mgbe. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihuchalu ozi, kọntaktị na foto hụrụ na ngwaọrụ gị. Pịa ha ka ha ego na zuru ezu. Họrọ ndị dị gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Gịnị na-Samsung n'Ụrọ Ukwuu n'ime ji mee ihe maka?
• mkpisiaka ịgụ isiokwu maka Easy ịkwụ ụgwọ - Ị nwere ike iji gị Samsung mbadamba iṅomi ma nyochaa njirimara gị na ndabere nke gị akara mkpisiaka ka online ịkwụ ụgwọ.
• Managing Android Smartphones Remotely - Na ziri ezi na ngwa, ị nwere ike ijikwa gị Android smartphones remotely eji gị Samsung mbadamba.
• Ịnweta PC Remotely - Na ziri ezi na ngwa, ị nwere ike ịnweta gị Windows PC remotely eji gị Samsung mbadamba.
• Play Games - Ị nwere ike igwu egwuregwu na gị Samsung mbadamba.
• Watch na Record Videos - Ị nwekwara ike kasị mma ntụrụndụ ahụmahụ na gị Samsung mbadamba.
Wondershare Dr.Fone for Android - A Mfe Way naghachi Your Lost Android Data
Akwado 6000+ Android ngwaọrụ gụnyere Samsung, HTC, Google, LG, wdg
E Nwere naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi, photos, video, na-akpọ ihe mere eme, akwụkwọ, wdg.
Preview na selectively naghachi ihe ị chọrọ site na Doppler N'ihi na gị android ngwaọrụ.
Ma gbanyere mkpọrọgwụ na unrooted Android ngwaọrụ na-akwado.
Naghachi ozi ederede site na Android
Naghachi Photos si gam akporo Devices
Naghachi Ndi ana-akpo si gam akporo Devices
Naghachi WhatsApp Ozi
Naghachi Videos si gam akporo Devices
Naghachi oku log si gam akporo
Olee otú Naghachi ehichapụ Data si Samsung captivate
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ na Samsung Galaxy
Olee otú Download Music ka Android
Olee otú ị nyefee Data si LG ka Android?
Top 20 Free na akwụ ụgwọ Android égwu ka Download
Olee otú Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ Data si HTC 8x / 8S
> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung Tablet